राज्यको ढुकुटीमा प्रधानमन्त्रीको मनपरी, धनाढ्य मन्त्रीलाई किन दिए ५० लाख? - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
राज्यको ढुकुटीमा प्रधानमन्त्रीको मनपरी, धनाढ्य मन्त्रीलाई किन दिए ५० लाख?
काठमाडौं – उपचार खर्च अभावमा धेरै नेपालीको सानो रोगका कारण अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । धेरै नेपाली एक एक रुपैयाँ जुटाउन सडकमा ‘भिख’ मागिरहेका भेटिन्छन् ।
काठमाडौंका रैथाने करोडपति मन्त्री प्रधानको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी उपचार खर्च वापत यति ठूलो रकम एकैचोटी उपलब्ध गराउने निर्णय शुक्रबारै गरिसकेको छ । काठमाडौं-६ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद् समेत रहेका प्रधानको करोडौँ सम्पत्ति रहेको कुरा उनले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणले नै प्रष्ट देखाएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।